प्रचण्डलाई मधेसी मोर्चाका नेताको प्रश्नः कमल थापालाई संघीय मामिलामन्त्री बनाएर के गर्न खोजेको ? | Radio Makalu 102.1 MHz Websoft University
प्रचण्डलाई मधेसी मोर्चाका नेताको प्रश्नः कमल थापालाई संघीय मामिलामन्त्री बनाएर के गर्न खोजेको ?
काठमाडौं,चैत ४ गते । मधेसी मोर्चाका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले संघीयता विरोधीलाई नै संघीय मामिलामन्त्री बनाएर सरकारले के गर्न खोजेको भनेर प्रश्न गरेका छन् ।
उनले चैत्र १५ गतेसम्म आफूहरुले नरम आन्दोलनका कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गरेको बताउँदै यो वीचमा सहमतिको लागि दुवै तर्फबाट प्रयास हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘तर निर्वाचन टोलीलाई हामी गाउँ पस्न दिँदैनौं, हामी आन्दोलन गर्छौं ।’-अनलाइनखबर
3/17/2017 04:36:00 PM